Enwere m ike ịbụ nke gị niile maka ọnụ ala taa, ọnụ ala nke ... | Martech Zone
Sunday, Eprel 29, 2007 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
Ọdịnaya dị na saịtị m esichabeghị ike n'izu gara aga - gbaghara ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime gị emechu ihu. Anọ m na-arụsi ọrụ ike na-emepe emepe ole na ole nke ngwa n'ụlọ. Ihe m na-anaghị eme n'ime ọdịnaya, enwere m olileanya ime na ụfọdụ plugins. Na-arụ ọrụ, anyị na-akwadebe maka a isi software ntọhapụ na m nwetara a ngosipụta oru ngo na-aga na-enye a ụzọ onwe-ngosi ụfọdụ nke kasị mkpa atụmatụ. Enwere otutu ihe na-aga nke ọma na m nwere ụkọ ego iji nweta ya ka ọ bụrụ ihe ịma aka.
All nke oru ngo na-enwe ọganihu omume ọma na m ga-izute deadlines, ọ na-dị nnọọ na-ewere ụfọdụ arọ ọrụ izu. Ọzọkwa, ana m enyochaghachi ọrụ m na-arụ oge niile ma na-echebara ọdịnihu m echiche ebe ahụ ma jiri ụfọdụ ohere siri ike tụọ ya n'èzí. Hate na-asị ịhapụ nnukwu onye were gị n'ọrụ, mana oge ụfọdụ ọrụ ga-agbadata iji nweta akụnụba dị mfe. M na-adịghị amasị na-a attentiona ntị ego mgbe ọ na-abịa a ọrụ, ma m na-arụ ọrụ na-enwe olileanya nke ịchụkwudo m ego a di na nwunye afọ gara aga mgbe m na-agba izu. Ọ bịara doo anya na nke ahụ agaghị eme ma ọ bụrụ na m nọrọ ebe a. Ebe nwa nwoke bidoro Mahadum na ọdịda nke a, aga m eme mgbanwe ụfọdụ ma mee ha ọsịsọ.
M hụrụ n'anya mgbanwe na m incredibly-enwe nchekwube banyere m ohere. Ọ fọrọ nke nta ka m pụọ maka mmalite ọnwa ole na ole gara aga, mana oge ahụ ezighi ezi. Otú ọ dị, ọ dị ezigbo mma. Mmadu ole na ole nwere ike tinyeghachi na mmalite ha na ha enyerela ụlọ ọrụ aka site na Vancouver Island ruo Iceland na Australia iji mejuputa ebumnuche azụmaahịa n'ịntanetị, njikọta, na akpaaka. Ndị ahịa m abụwo ụfọdụ n'ime ndị kasị ibu n'ụwa, gụnyere Indianapolis Colts, Home Depot, United Airlines, Icelandair, Liberty Mutual, Goodyear, Hotels.com, AG Edwards, na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepe na ụlọ ọrụ ndị dị n'etiti. Tupu nke ahụ, ewuru m nde kwuru nde akwụkwọ maka akwụkwọ ozi a kapịrị ọnụ maka otu nnukwu akwụkwọ akụkọ. Ihe ịga nke ọma na-ewulite obi ike, yabụ enwere m obi ike na m nwere ike ịgbanye ụlọ ọrụ ọ bụla ma a bịa n'ịzụ ahịa na teknụzụ.
Dị ka ma onye na - ahụ maka Mmekọrịta na Onye na - ahụ maka Ahịa, ọrụ m dị na ịgagharị na ụlọ ọrụ achụmnta ego, mata ohere dị na ya, ma mezuo ihe ngwọta kwesịrị ekwesị maka ha. Ọrụ m dị ugbu a na-elekwasị anya na nnabata CAN-SPAM, Nhazi ihu njirimara, Nnweta, ojiji, API na njirimara mmepe. Amaara m nke ọma usoro ihe ọmụma banyere Geographic, Analytics na Search Engine Optimization. Ọfọn, Enwetara m aha m na mbipụta afọ a na ụfọdụ ntinye m mere Akwụkwọ Chris Baggott, Email Marketing site na Ọnụ Ọgụgụ.
M na-atụ anya ịnọgide na-arụ ụdị ọrụ a - ma site na ụlọ ọrụ ndụmọdụ m ma ọ bụ site na ọkwa Director / Executive na ụlọ ọrụ ọzọ. Enwere m mmasị na ya ogologo oge mmekọrịta nkwekọrịta. Nrọ nke mezuru ga-amalite malite ịgba izu n'okpuru ụlọ ọrụ nke m. Enweghị m ike ịhapụ Indianapolis - ụmụ m hụrụ ya n'anya ebe a ma ha bi n'akụkụ nne ha. Yabụ ọ bụrụ na enwere ohere iji rụọ ọrụ dịpụrụ adịpụ, m niile maka nke ahụ. M na-atụ anya mmiri amịrị n'isi mbụ n'ime ụfọdụ nsogbu ndị ọzọ, ikekwe Search Engine Optimization. Enweela m ụfọdụ nsonaazụ dị egwu na saịtị a ma mara na m nwere ike ịme ya maka ndị ọzọ.
Oh… na Aga m ahapụ blog! 😉
Tags: douglas karr-achọnjikwa ngwaahịa
Ọ dị mma ịnwe onyinye na-adọrọ adọrọ. Ọnwa ole na ole gara aga, enyere m 100K ka m rụọ ọrụ otu afọ na Qatar, obere obodo na-abụghị Iraq, dịka onye nchịkwa netwọkụ.
Nke a ga - eme ka ị bụrụ m onyinye ọnwụnwa 8 afọ gara aga, mana ugbu a na nwunye na nwa nwoke 9 ọnwa, ị gaghị ewepụ m ebe a ma ọ bụrụ na ịnwale!
Ahapụrụ m ọrụ oge niile ọnwa 3 gara aga ịmalite ụlọ ọrụ ọhụụ, ọ dịbeghịkwa mgbe ọ bụla m nwere ume 🙂 n'ihi na enwere m onwe m ịrụ ọrụ na ihe masịrị m (n'ime oke ụfọdụ!) M na-eme ihe karịa ka m metụworo.
Enwere m uru nke onye ọlụlụ na-eweta ego zuru ezu iji mee ka ụlọ ọrụ na anyị na-ese nke na-enyere aka!
Oh, ma ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ ugbu a gụọ Doug a ma juo anya ihe na-eme? 🙂
Mee 1, 2007 na 11: 20 AM
Ebe ọ bụ na ị bụ ezigbo enyi m, M na-aga na-a bit oké egwu ebe a na-edebe gị post na udi nke “ikuku airing ruru unyi” n'ihu ọha. Ọtụtụ n'ime anyị na-akatọkarị ndị egwuregwu na-eme egwuregwu maka ụdị nkwupụta a (eg Terrell Owens, Randy Moss). Ọ bụ ezie na ha na-aga n'ihu na ndị ọzọ na-ewe ha n'ọrụ ma na-aja ha mma maka ọrụ na-atọ ụtọ na ọrụ ha, akparamagwa ha na-emebi nke ọma ka oge na-aga.
Mee 1, 2007 na 12: 49 PM
Chei, nke ahụ abụghị ebumnuche nke post, Randy. N'ezie, enweghị m ihe ọ bụla ma e wezụga ihe ọma m ga-ekwu banyere onye were m n'ọrụ ugbu a. Enweghị ‘uwe na-adịghị ọcha’ na post ọ bụla. M ka na-agbasi mbọ ike n’ebe ha nọ ma na-eche na ha bụ ihe kacha mma m rụtụrụla.
Nke a abụghị ọkwa a na-agbanye n'ụzọ ọ bụla iji merụọ onye were m n'ọrụ ugbu a ma ọ bụ na-ehicha akwa na-adịghị ọcha - ọ bụ post iji 'nwalee mmiri' ma hụ ohere ndị m nwere ike ịnọ ebe ahụ amaghị m. Ana m eru n'okporo ụzọ na ndụ m ebe ihe mgbaru ọsọ m adabaghị na ohere ọrụ m dị ugbu a. Nke ahụ bụ dịka m nwere ike itinye ya.
Ọ ga-akara m mma ikwu eziokwu banyere ihe m chọrọ karịa imechi ọnụ m. O nwere ndị na-eche na i kwesịghị ikwu ihe ọ bụla ma si n’ụzọ ahụ pụọ. M na-eche banyere ụlọ ọrụ a nke ukwuu ime nke ahụ. Ha kwesịrị ịmata ihe m chọrọ bụ na m kwesịrị ịmata ihe ha chọrọ bụ. Ọ bụrụ na enwere egwuregwu, m banyere! Ọ bụrụ na ọ bụghị, m ga-aga n'ihu na ndụ m.
Ọzọkwa… e nweghị ‘ahịhịa ruru unyi’ ikwu okwu.
Mee 1, 2007 na 11: 24 PM
Inwale mmiri dị mma. Inwe onye ọrụ dị ugbu a chọpụta banyere ya na post blọgụ so ọ bụghị nke ọma… mana, Ana m eche na ị nweela mkparịta ụka gị na ha ma karịa na ọ nweghị nke azụmahịa m.
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka oge-oge, gwa m.
Mee 2, 2007 na 6: 41 AM
Ekwetaghị m na o juru ha anya - mana enwere ụfọdụ nchegbu. Kemgbe ụwa m, m na-emeghe ihe ma na-akwụwa aka ọtọ. Nke a na-abịa naanị ọnwa ole na ole mkparịta ụka na mkpebi.
N'ezie, ịde blọgụ na-eweta akụkụ ọhụụ kpamkpam n'ọnọdụ dị ka nke a. Ọ bụghị ihe ị nwere ike ile anya na ntuziaka njikwa, nke ahụ bụ eziokwu! Anyị na-arụ ọrụ site na ya.